Ciyaarta Khaliijka – Imaaraadka oo Fashilmay, Qadar oon Is-dhiibin iyo Soomaaliya oo La Iibsan! | JAMHURIYADDA
Home Caalamka Ciyaarta Khaliijka - Imaaraadka oo Fashilmay, Qadar oon Is-dhiibin iyo Soomaaliya oo...
Ciyaarta Khaliijka – Imaaraadka oo Fashilmay, Qadar oon Is-dhiibin iyo Soomaaliya oo La Iibsan!
Talaadadii January 5, 2021 saacado ka dib markii Dooxa laga qaaday xannibaaddii ayaa Amiirka Sacuudiga Maxammed bin Salmaan garoonka diyaaradaha Al-Culaa ku soo dhaweeyay Amirka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad oo uusan seddax sanadood iyo bar la hadlin.
Inkastoo aan faahfaahinta heshiiska loo soo bandhigin dadweynaha, haddana shir madaxeedka dowladaha khaliijka ayaa u muuqda mid horumar ka gaaray dib iskugu keenista labada dhinac, si loo xasiliyo xiisada gobolka.
Boqortooyada Sacuudiga oo haggaaminayso dalalka Imaraadka, Masaarida iyo Baxreyn ayaa xidhiidhka ganacsiga iyo diblomaasigaba u jaray Qadar. Xulufada afargeeska ah waxay ku eedeeysay Dooxa inay taageerto himilooyinka dowladda Iran, iyo kuwa kooxaha xagjirta ah oo ay ka mid tahay Ikhwaanul Muslimiinta.
Ujeeddooyinka dhabta ah ee kooxdu waxay soo shaac baxday markii Qadar la hordhigay saddex iyo toban dalab oo aan macquul ahayn. Inkastoo Trump uu si degdeg ah u taageeray mowqifka Riyad iyo Abu Dhabi, haddana siyaasaddii xannibaadda wax badan laguma dheefin.
Maanta ma cadda in Qadar ay tanaasulaad muhiim ah samaysay, waxayse su’aal ka taagan tahay: Maxaa isbeddelka degdegga ah keenay?
Xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa rumeysan in dhowr xaaladood ay sababayn gulufka diblomaasiyadeed. Ilo xog-ogaal ah ayaa qaba in Mareykanka uu xoogga saaray qaboojinta xiisadda isagoo ka baqaya in Iran oo colaadineysa Yuhuudda ay ka faa’iidaysato khilaafka Riyad iyo Dooxa. Dadaalkaas waxuu xoojinayay awoodda Washington ee lidka ku ahayd Iran.
Aragtidaas waxaa barbaryaal mid ay soo bandhigtay Fox News oo qabtay in heshiis laga soo hoyo go’doominta Qadar, inta ka horraysa doorashadii November 2020 uu guul weyn u noqon karo ololaha dib u doorashada Madaxweyne Trump (Middle East Eye 9/07/2020). Haseyeeshee, taasi ma aysan suuraggelin.
Aragti saddexaad ayaa iyana qabta in dadaalku ka dhashay walaac ay Boqortooyada Sacuudiga ka qabto maamulka Joe Bidin oo la filayo inuusan sii wadi doonin siyaasadda uu ka dhaxlay maamulkii Trump.
Go’aanka takooridda Qadar waxuu ahaa mid Amir Maxammad bin Zayed uu naqshadeeyey, kaas oo u muuqda mid fashilmay (Aljazeera 7/01/21). Cadaawada Abu Dhabi ee Dooxa ayaa ahayd tan ugu adkayd iyadoo weliba siyaasadda Imaaraadka ay ku fashilantay Liibiya, Soomaaliya, Suuriya, Turkiya iyo Yemen.
Si kastaba ha ahaatee, soo dhaweeytii cajiibka lahayd ee May 2017 loo sameeyey Madaxweyne Trump ayaa ahayd digasho loola danlahaa maamulka Obama. Sanad ka hore Abril 2016 ayaa Madaxweyne Obama oo boqoshadiisii ugu dambeysay ku tegay Sacuudiga, uu garoonka ku soo dhaweeyay guddoomiyaha magaalada Riyadh. Maamuus xumadaas waxay muujinaysay sida boqortooyada aysan raalli uga ahayn siyaasadda Obama-Biden ee khaliijka (The Guardian 20/04/2016).
Iyadoo ay taasi jirto, haddana maamulka Biden dhabarka uma jeedin doono boqortooyada gebi ahaan. Ahmiyadda siyaasadda Aqalka Cas waxay noqon doontaa mid raacsan tii Riyadh ka carootay, taas oo ah waxa boqortooyada walbahaarka ku riday kuna qasba inuu kireysto shirkado u ololeynaya (lobbying firms).
Walow Amiirada khaliijka ay ku mashquulsan yihiin fara-isku-fiiq, haddana Riyadh marnaba kuma fikirin in fudeedka Abu Dhabi uu bohol ka tuuri doono, siyaasaddii Obama-Biden-na ay dib u soo laaban doonto. Intaba waxaa ka daran, in wiil uu dhalay Trump uu sheegay in amiirada labada boqortooyo ay u hamuun qabeen inay ka caawiyaan aabihiis inuu ku guuleysto Aqalka Cad (VOA News – 22/5/2018).
Maanta waxaa loo aayey dadaalladii Kuwait. Taasi oo ah dharbaaxo wejiga looga dhuftay Abu Dhabi oo damacday inay sharafta ummadda Soomaaliyeed shilimaad yar ku iibsato, balse Eebe ka dhigay mowqifkii Muqdisho mid suubbanaa.
Waxaa hubaal ah in waddana uusan awood u lahayn inuu cadaadis ku soo rogo mid kale haba ka tabar liitee. Casharka laga bartay Riyadh iyo Dooxa ayaa ah mid looga baahan yahay Nairobi inay ku cibro qaadato, lana timaad siyaasadda dersi wanaag iyo isqadarin ka sokow, gacan ka geysata xasilloonida gobolka.
Burhan H. Rooble & Cabdulqaadir Cariif
Previous articleSheeko Madmadow Leh – Maxay Soomaaliya Uga Dhigan Tahay Xubinnimada Kenya ee Golaha Amniga?
Next articleWaa Maxay Sababaha Fashiliyay Dib U Doorashadii Xasan Sheikh Maxamuud ee 2017kii?